२०७६ असोज ११ शनिबार १२:५८:००
ऊ व्यस्त छे रे । फुर्सदमा मेरो प्रेम ? उसको सार्वजनिक जीवन छ, मेरो प्रेम निर्जीव ?
हुन त म पनि व्यस्त छु । तर उसका लागि जति पनि छ समय । नढाँटी भन्दा समय निकालेको छु, व्यावसायिकता कटाएर ।
प्रेम नै त के भनूँ ! ऊ र मबीच झन्डै १५–२० वर्षकै अन्तर होला उमेरमा । “म प्रेम गर्छु” भन्ने उसले पनि त सोचेकी हुनुपर्‍यो !
“प्रेमका लागि उमेर मिल्नुपर्दैन र ?” सायद उसले सोचेकी हुनुपर्छ । मेरा लागि त मात्र प्रेम ! प्रेम !! प्रेम !!!
म ऊसँग सहकार्य, सहयात्राको कोसिसमा छु । अन्तरङ्ग कुरा गर्न चाहन्छु । सीमाहीन, बेपर्वाह समय बिताउन चाहन्छु । मतलब, म उसलाई मन पराउँछु । निकै आत्मीय लाग्छे ऊ मलाई— शीतल, शान्त, स्निग्ध... । कोही किन यति साह्रो मायालु हुन्छन् हँ ? सहृदयी, आनन्ददायी ! उसको सम्झनाले मात्र पनि पुलकित हुन्छु । मेरो अन्तस्करणमा कताकता आनन्द सवार हुन्छ । अनुहारमा मुस्कान छाउँछ । सिमलको भुवा जस्तो, कस्तो कस्तो ! मनै फुरूङ्ग ! व्याख्यै गर्न सक्तिनँ म । काँक्रो जसरी छाती चिर्न मिल्ने भए हेर्न हुन्थ्यो, उसलाई देखाउन हुन्थ्यो मेरो मनभित्र ऊप्रतिको चाह । बैंसालु प्रेम होइन, म उसलाई प्रौढ माया गर्छु । वासनात्मक होइन, आत्मिक प्रेम गर्छु । साँच्ची, प्रेमको पनि वर्गीकरण हुन्छ र ? सुनेको छु— प्रेममा डुबेका जोडी सधैं युवा हुन्छन्, जुनसुकै उमेर र अवस्थामा !
हुन त तन्नेरीमा पनि ममा यस्तो अनुभूति भएन । “मान्छे एक पटक गहिरो प्रेममा पर्छ” भन्थे । साँच्ची रहेछ । तर एकपक्षीय कि दुईपक्षीय ? पक्ष जे भए पनि मेरो प्रेम सही हो । तर ऊ मान्ली ? ऊप्रतिको मेरो लगाव प्रेम नै हो ? होइन भने मन किन यति हुरूक्क भएको ? केका लागि ? साथ र सहकार्य ? बिलकुल होइन । दोस्रो बिहे ? हैट्, मजाकको कुरा किन आउँछ मनमा !
प्रेमको प्राप्ति विवाह हुन सक्तैन । कैयौं प्रेम यस्ता छन्, जो विवाहबिनै जीवन्त छन्, अमर छन् । हो, म त्यस्तै जीवन्त प्रेम खोजिरहेछु ।
यसमा उसको प्रतिक्रिया के आउला हँ ?
सायद ऊ बेमज्जाले हाँस्छे वा अनुहार मलिन बनाउँछे होला । अथवा मलाई बेहिसाब गाली गर्ली, “लाहुरे गाउँका परिवार बिगारेर पुगेन ? अब आफ्नै परिवार बिगार्न लाग्यौ ? मेरो करिअरमाथि आँखा लाएको ? मेरो राजनीतिक यात्रामा अवरोध सिर्जना गर्न कोसँग कति गाँठ लियौ ? तिमीहरु त गाँठबिना काम गर्दैनौ, होइन र ?”
एउटा ग्रामीण घरेलु मुद्दाको प्रसङ्गमा उसले भनेकी थिई, “तिमीहरु पीडित र पीडक दुवै पक्षबाट बिचौलियामार्फत पैसाको बिटो लिएर मुद्दालाई दुहुनो गाई बनाइरहन्छौ । “वकिलकै कारण ८० प्रतिशत मुद्दाको फैसला समयमा हुन नसकेको” आरोप छ, न्यायालयतिर । घरझगडा, अंश मुद्दा, पारपाचुके, साधारण लेनदेन जस्ता मुद्दा बढ्नुमा प्रमुख हात तिमीहरुकै छ । सल्लाह र सहयोग माग्न आएका मान्छेलाई मुद्दा हाल्न उक्साउँछौ । अनि बर्सौंसम्म मुद्दाको फैसला नगराउन मिलेमतो गर्ने... तिमीहरुमा लुकेका रङ त कतिकति... ।”
पहिलो भेटमै आफ्नो औकात देखाई उसले— पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, पूर्वविद्यार्थी नेता, पूर्व टोल नेता, पूर्वराजदूत, पूर्वसचिव, पूर्वन्यायाधीश आदिको नाम लिँदै । सायद वर्तमान ओहदाको नाम नलिन ऊ निकै सचेत थिई वा वर्तमानको ठेक्का सबै आफ्नै ठान्थी । आफन्त पर्नेको पारपाचुकेका लागि दायर मुद्दाको फैसला समयमा नगराएको अर्थात् नगराउन दबाब दिएको आरोप थियो उसको ।
“मन्त्री, सचिव, न्यायाधीश छँदा पो फूर्ति, केही गर्ने हैसियत, पद खोसिएपछि उही सर्वसाधारण, उही फुटपाथे । मेरो यो कुर्सी पेसा नछोडुन्जेल मेरै हो,” जुरूक्क उठेर कुर्सी देखाउँदै मैले जवाफ दिएको थिएँ । “मुद्दाको फैसला बहस गर्ने वकिलको हातमा होइन, सिङ्गो अदालत, बेन्च तोक्ने मुख्य न्यायाधीश र इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरुको हो” भन्ने दिव्यज्ञानका साथ पहिलो भेटको बिदाइ गरेको थिएँ मैले ।
आगोको त्यो लप्को पछिल्ला दिन ‘चिनीलहरो’मा परिणत हुँदै आयो । सम्झनाले मात्रै पनि शीतलता ल्याउने गरेको छ, शरीरमा । फेरि आगो बल्न थाल्यो भने ? उही रणचण्डीको स्वरुपमा उत्रिई भने ? उफ् !
दुवै हातले दुई चल्लीसँगै आँखीभौं थिच्यो । बिस्तारै दायाँ हातको चोरी औंला र बूढी औंलाले दाहिने र देब्रेतिरबाट निधारको छाला सोहोरेर नाकमाथि ल्यायो । सम्पूर्ण स्मरणहरु अनुहारमै थोपरिए जसरी दुवै हातले सर्लक्क सोहोरेर चिउँडोसम्म लग्यो । मिल्ने भए सिँगानजसरी फालिदिन्थ्यो, मनको पीडा ।
ऊ जता पनि त्यो युवतीको मायालु स्वभाव मात्र देख्छ । स्मरण मात्रै गर्नु छ । अर्थात्, अरु सबै छोड्यो, सायद अब उसले उसैको स्मरणमा मात्र डुब्नु छ ।
“यति साह्रो नेगेटिभ हुनुपर्ने के छ र ? आई लभ यू टू” भन्दै अङ्कमाल पनि त गर्न सक्छे ! अन्तःस्करण कुतकुतियो— मनको लड्डु घिउसँग खाए जस्तै । अनुहारमा मीठो स्मृति दौडियो तुरून्तै ।
दाहिने हातले चिउँडो अड्यायो, अनि मन्द मुस्कुरायो ।
“हजुरलाई त के नि, हामी जस्ता कैयौं राजनीतिज्ञहरुसँग निकटता होला । तर मेरो चाहिँ हजुरसँग कस्तो कस्तो, ‘वेभ’ मिले जस्तो ।” पहिलो पटक वारेसनामा बनाउँदाको त्यो समय सम्झन्छु— पछि मलाई साथीहरुले जिस्क्याएका थिए, “वकिल पनि क्या ह्यान्डसम फेला पारेको ! युवराज नै भएर आयो कि क्या हो !” एक दिन तेस्रो भेटको स्मरण सुनाएकी थिई ।
कहिलेकाहीँ यस्ता टिप्पणी र जिस्क्याइले पनि आनन्द दिँदा रहेछन् । म हाँसें मात्रै । अनुमतिबिना नै मेरो अन्तस्करणले यस्ता धेरै टिप्पणी सुन्न चाहिरहेथ्यो । तर उसले पनि आफ्ना अभिव्यक्ति निकै फारू गरेकी थिई ।
“....साह्रै स्मार्ट देखिनुभएको थियो !” फेरि प्रसङ्ग कोट्याई उसले ।
अगाडिको भनाइमा व्यङ्ग्य बुझेर होला, अनुहार अलि अमिलो भए पनि अन्तस्करण बिस्तारै खुल्दै थियो । मलाई ‘विशेष’ सम्झिएकोमा खुसी पनि लाग्यो । तर अनुहारतिर खासै झल्काइनँ, मनमै सीमित गरें ।
अरु नेता जनतामारा, ऊ अलि विशेष । फेरि अरु भ्रष्टाचारी छन्, ऊ सदाचारी । सायद ऊ ‘आम’ राजनीतिज्ञमा पर्दिनँ । हुन त मेरो मनले चाहेर पनि हुन सक्छ, उसको सादा जीवन र सदाचारीपन !
तर उसले आफूलाई होइन, मलाई ‘आम’मा राखी । ऊसँग त म जस्ता कैयौं ठोक्किन आएका छन् । भविष्यमा पनि आउनेछन् ।
ऊसँग को ठोक्किए, को ठोक्किएनन् ? कसको सहकार्य कति लामो र कसको छोटो भयो ? हिजो को थिए, भोलि को हुन्छन् ? मेरो सरोकारको विषय होइन । बस्, मेरो प्रेम शाश्वत छ । उसका अगाडि सर्वस्व बिर्सन्छु म ।
उसको अनुपस्थितिमा यादहरु सलबलाउँछन् । छोप्छन् मलाई । गम्लङ्ङ अँगालो हाल्छन्, उछार दिँदैनन् एकैछिन ।
यो मृगतृष्णा केका लागि ? न्यायो स्पर्श ?
हातसम्म मिलाउन पाएको होइन । सधैं टाढैबाट दुई हात जोर्दै आउँछे । यस्ता पनि नेता रे ! कम से कम हात त मिलाउनु नि ! मुद्दा फैसला भएको दिन त हात मिलाउँछे होला भन्ने ठानेको थिएँ । नमस्तेमै टार्छे बा ! बढेको मेरो हात निरस भई फेरि सतर्कमा बस्यो ।
हिजो पनि त्यस्तै भयो— न भेटमा हात मिलाई, न त छुट्टिने बेलामा ।
मोबाइलमा तय भएको स्थानमा पुगिसकेकी थिई ऊ, मभन्दा पहिले ।
हतारहतार म पुग्दा कुर्सीबाट उठी । नमस्कार गरी । अनि नब्बे डिग्री मिलाएर दुई हात परको कुर्सीमा बसाई मलाई ।
उसकै साइडमा बसाएको भए के जान्थ्यो त्यसको ? मैले छुँदैमा जातै जाने त होइन होला ! निकै रिस उठ्यो । तर म चुपचाप बसें । ऊ पनि बोलिन ।
केही समय मौनता छायो ।
मेनु हेरेर एउटा खाना र एउटा खाजा मगाएँ ।
“तपाईंको प्रेम विवाह ?”
“किन ?” मलाई उसको जिज्ञासा अनौठो लाग्यो । तर वास्तवमै अनौठो थियो कि थिएन, म अलमलिएँ ।
“नाइँनाइँ, कुराकानीको बाटो नि । के गर्नु त ? अक्सर यस्तै त हो कुराकानी, होइन ?” मतिरै प्रश्न तेस्र्याई उसले ।
म फिस्स हाँसें ।
“केही विशेष थियो कि ?” मैले गरेको प्रस्तावमै तय भएको थियो, भेटघाट । उसले खास कारण जान्न चाही ।
सुरूका तीन पटकबाहेक अरु भेटघाट मेरै प्रस्तावमा हुने गरेका थिए । तर साह्रै थोरै समयका लागि । नेता न परी । खास एजेन्डाका लागि अचानक मिलाइएको समय । मात्र एक कप कफी ।
“त्यत्तिकै, खास होइन । सँगै कफी पिऊँ भनेर । अस्ति म्यासेज मात्रै आयो, यसो... ... ।”
“ए ए ए”, पूरै दन्तलहर देखाएर हाँस्तै भनी, “जनताका लागि । एकमुष्ट सबैका लागि पठाउँदा हजुरलाई पनि गयो होला । के गर्ने, यस्ता हरेक पर्व र सन्दर्भ विशेषलाई ख्याल गर्नुपर्छ हामीले । यस्तोमा “शुभकामना !” भनेन भने... फेरि भोट र निर्वाचनसँग लगेर जोडिहाल्छन् विषयवस्तुलाई । गाह्रो छ नि हजुर !” मैले आफ्नो भनाइ नसक्तै उसले रोकेर सोही गतिमा प्रस्ट पारी, “फेरि अहिले त सब नर्मल भइसके नि यस्ता कुरा । सबैले सबैलाई “ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे” भन्छन् । यो विशेष प्रेमीप्रेमिकामा मात्रै सीमित रहेन अब ।”
“म तिमीलाई प्रेम गर्दिनँ” वा “तिमी मेरो प्रेमी होइनौ” भनेर स्पष्ट पारी उसले । उसको भनाइलाई मैले यसरी नै बुझें, उसका लागि म पनि मात्र जनता !
“फेरि तपाईंको उमेरऽऽ २०–२५ कै फरक होला, हैन ? बढी भनें कि ? मलाई त्यस्तो केही हेक्का थिएन ।” मोबाइल म्यासेज र भ्यालेन्टाइन्स डेको सन्दर्भको अज्ञानतासँगै उसले सजिलै प्रेमलाई उमेरको सीमा लगाइहाली । अर्थात् ठूलै बारले छेकी ।
मैले उसलाई हेरिरहें ।
“...साँच्ची कति वर्ष हुनुभो, हजुर ?”
“हन, यो उमेरको विषय कताबाट आयो ?” आफूलाई निकै जवान प्रमाणित गर्ने उसको धृष्टता मलाई चित्त बुझेन । अन्तस्करणको अव्यक्त असन्तुष्टि अलि फरक ढङ्गले जताउँदै प्रसङ्ग बदलें, “म पनि व्यस्त, हजुर झनै व्यस्त । फेरि हजुरको त क्षेत्रै त्यस्तो— आतिथ्य, उद्घाटन, भाषणभूषण, भेटघाट, बैठक, संसद्, भ्रमण, डेलिगेसन... ।”
“हो, बिहान एउटा अन्तर्वार्ता थियो । त्यसपछि मिटिङ । जिल्लाबाट साथीहरु आएका छन् । एक जना साथीलाई यहीँ बोलाएकी छु । अहिलेसम्म खाना खाने समय मिलेको छैन, फेरि अर्को बैठक भ्याउनु छ, २ः०० बजे संसद्...,” ऊ बोल्दाबोल्दै हाम्रो टेबलमा एउटा खाजा र एउटा खाना आइसकेको थियो । उसले साथीका लागि केही बेरमा खाजा ल्याउन निर्देशन दिई ।
“यसो अलि लामो समय बसेर अन्तरङ्ग कुरा गरौं भन्ने हुन्छ नि, त्योचाहिँ नमिल्ने के ! झन् हाम्रापछाडि त पत्रकारहरुको दृश्यअदृश्य घेरा— कहाँ, कसरी जालमा पार्ने भनेर । हाम्रो समाजमा राजनीतिज्ञहरुको छवि राम्रो छैन नि । एउटा पत्रकारको टार्गेटमा परियो कि चट् ! कहाँ, कसरी, कहिले फसिने हो, थाहै हुँदैन । सांसदहरुको तेलकाण्ड, घरभाडा, गाडी सुविधा, भ्रमण, पिए, उँगाइ, निदाइ, भोज, पार्टी... कति हो, कति जालहरु पनि । हालै सार्वजनिक एक उच्च अधिकारीको फेदटुप्पो काटिएको भिडियो । उफ्, के कुरा गर्नु, कुरा गरिसक्नु छैन । सो डेन्जर ! हामी अहिले डेन्जर जोनमा हिँडिरहेछौं । बाहिरी मुलुकमा यस्तो हुँदैन । हुन त कतिपय मुलुकमा त्यस्ता स्क्यान्डलहरु आइरहेका हुन्छन् । तर पदीय हैसियतभन्दा चारित्रिक कुरा साह्रै डेन्जर ! अझ हामी महिलाका लागि त... । अरुको नजरमा गिराएर प्रतिस्पर्धाको दौडमा पछि पार्ने सबैभन्दा सजिलो औजार हो, चारित्रिक आरोप— सो सिरियस, सो डेन्जर ! मिडियामार्पmत विपक्षी उत्रने चलनै भइसक्यो राजनीतिमा !”
मलाई आदर्श लाग्यो उसका कुरा । खाजा खाएको पनि मेसो पाइनँ । भाषणसँगै उसले खाना पनि खाइसकी ।
“हामी निकै डेन्जर जोनमा हिँडिरहेछौं । म त सार्वजनिक व्यक्ति... ।”
“के सार्वजनिक मान्छेको मन हुँदैन ? के ऊभित्र हृदय छैन ? के उसका नितान्त निजी विचार र चाहना हुँदैनन् ? सधैं स्टार होटलमा मात्रै किन ? न्युरोडको पानीपुरी खाने रहर हुँदैन ? कुनै पार्क वा बगैंचामा चराका चिरबिरसँगै एकछिन मन बहलाउने चाह हुँदैन ?” उसले कोर्न खोजेको सतर्कताको सीमारेखासँग औधी आक्रोशित भएँ म ।
फेरि पनि किन चुप भएँ म ? थाहा छैन । ऊ त्यस्तै विषय फलाक्तै गई, मैले सुनि मात्र रहें ।
ऊसले घडी हेरी । मैले बुझें, उसको कार्यकर्ता आउने बेला भयो ।
बिल तिरें र जुरूक्क कुर्सीबाट उठें ।
“हजुर बस्ता हुन्छ । सँगै निस्कौंला नि । उहाँ हाम्रै जिल्लाको हो । खास फरक पर्दैन ।”
“होइन, म अलि हतारमै छु । हजुरहरु आरामले कुराकानी गर्नुहोला,” अलि कडै बोलें ।
“आज पहिलो पटक अरु कसैले पैसा तिरेर खाजा खाएँ मैले,” मुस्काउँदै भनी, “थ्याङ्क्स अ लट !”
“मेरो हैसियतलाई कि प्रेमलाई यो सम्मान ?” जे होस्, म मक्ख । उसिनेको आलुको बोक्रा जसरी आक्रोशको आवरण उत्रियो, तुरून्तै । मुस्कुराउँदै भनें, “यो समय र अवसरका लागि आभारी छु । थ्याङ्क यू !”
रहस्यात्मक लाग्यो प्रतिक्रियामा उसले छोडेको मुस्कान । मेरो अन्तस्करणमा काउकुतीको कुस्ती चल्यो । मन्द मुस्कानसहित बाहिरिएँ ।
म उसलाई धेरै कुरा सुनाउन चाहन्थें । सुनाउँछु भनेरै आएको थिएँ । तर सबै गुजुल्ट्याएर आफैंसँग फर्काएँ । अनुहारमा मुस्कान पोतिए पनि भित्र कताकता नरमाइलो महसुस हुन छाडेको थिएन ।
यसअघि पनि त्यस्तै भयो— केके भन्छु भनेर सोचें । तर भन्नै सकिनँ ।
केही त पक्कै हुनुपर्छ । कस्तरी लजाएकी थिई, ऊ अघिल्लो भेटमा । बिदाइको मुस्कानलाई यसअघिको भेटसँग तुलना गरें । सधैं सारीमा सजिने ऊ त्यस दिन प्यान्ट र टिसर्टमा थिई । शिरदेखि पाउसम्म ‘ब्ल्याक’ । टकटक हिलको आवाज । कालो चस्मा टाउकोमा । छरिएका केशराशि बेपत्तासँग सलसलाइरहेका ।
“मान्छे ढाल्ने ड्रेसअप छ त हजुर ?”
फरासिली मान्छे, भन्न भ्याइहाली, “हो र ? लौन !” बस्नै लाग्दा उसले जिन्सको ज्याकेट मिलाई । केश सुमसुम्याई । बडो होसियारीसाथ ओठलाई चलायमान बनाई । लिपस्टिक पुछिन्छ भन्ने डर हुँदैनथ्यो भने आफ्नै ओठ आकार आकारमा टोक्थी सायद— अहिलेका तरूनीहरुले छँदाखाँदाका राम्रा ओठ बाङ्गो पारेर सेल्फी खिचेजसरी ।
“अनि के छ ?”
सामान्य सोधपुछपछि केही बेर शान्त भयो वातावरण । वरपरका टेबल हेरी । ब्यागबाट झिकेर मोबाइल हातमा लिई । फेरि बसाइ अलिकति मिलाए जस्तो गरी कुर्सी घ¥याकघुरुक पारी ।
म मात्र उसलाई हेरिरहेको छु । न मलाई वरपरका टेबलका मान्छेको वास्ता छ, न त परिस्थितिको ।
“उसले के चोर्दै छे ? मेरो मन ?” चोरले जस्तै पल्याकपुलुक हेरिरहेकी छ, यताउता ।
म भने एकोहोरिएको छु, “मेरो प्रेमको क्यानभासमा रहेकी उसलाई अरुले चोर्छन् कि ?”
चोर्ने को होला ? उसको मनको बाकस कत्तिको बलियो होला ? चाबी कत्रो होला ? फुटाउन पाए ? तर कहाँ सजिलो छ र मन चोर्न ? टेबलमुनिबाट खाम दिएर प्रमाण जुटाए जस्तो सजिलो हुन्छ र मनको प्रमाण जुटाउन ? घण्टौं बयान लिए जस्तो सजिलो पनि छैन, मायाको बकपत्र तयार पार्न ! अधिवक्ताको सट्टा प्रेमवक्ता भएको भए... ।
“खास केही थियो ?” उसले त्यस दिन पनि उही प्रश्न दोहो¥याई ।
“यसरी कार्यकर्तालाई गर्ने तयारी चाउचाउवाला प्रश्न मलाई किन ?” म भित्रभित्रै पिल्सिएँ । तर भनें, “त्यत्तिकै, जस्ट भेटघाट, लामो समय भएको थियो । यसो सम्झेको नि ! कहिलेकाहीँ यस्ता भेटघाटले फ्रेस बनाउँछन् । आनन्द ल्याउँछ नि मनमा— निरन्तरतामा क्रमभङ्ग ।”
“यी त सब भन्ने कुरा न हुन्,” विश्वास गरिन उसले ।
“हो है ? रामकृष्ण ढकालको गीत जस्तै— यी त सब भन्ने कुरा न हुन् ।”
“अँ, लाइक, त्यस्तै,” आँखा जुधाएर हाँसी र बिस्तारै तल्लो ओठको छेउ टोकी ।
दुख्यो कि ? मेरा आँखीभौं खुम्चिए । सतर्क भएँ ।
फेरि सम्झें— मैले टोकेको हो र ?
टेबलको मोबाइल समाती । घ्याच्च पारी र चोरी औंलाले स्क्रिन सारी । खै के हेरी कुन्नि ? फेरि उसै गरी बन्द गरी । अनि पहिलाको भन्दा अलिकति ठाउँ सारेर राखी । फेरि बसाइ अलिकति मिलाई ।
“जरूर उसको मन छचल्काएको छु मैले ।” म भित्रभित्रै विजयोत्सव मनाउन थालें, “नभए किन यति अस्थिर छ ऊ ।” पहिलाको भेट जस्तो सहज उपस्थिति थिएन उसको ।
“राजनीतिज्ञहरु सयौं आउँछन् । मैले, हाम्रो टिमले काम गरिदिन्छौं । जस्ट कामको मात्रै सम्बन्ध तर हजुरसँग... आई डन्ट नो, आस्था अलि फरक छ । म माया गर्छु । हामी माया गर्छौं । मतलब मेरो टिमले नै हजुरलाई माया गर्छ ।” रोक्तारोक्तै फुत्किएका भावनाका थुँगालाई जेनतेन सम्पादन गरी ठाउँमा ल्याएँ ।
टेबलमा राखेको मोबाइल अन गरी । स्क्रिन सारी । अनि फेरि घ्याच्च पार्दै स्क्रिन अफ गरी । फेरि उसै गरी मोबाइल राखी र पुलुक्क मतिर हेरी, “मलाई साझा मान्छे बनाएकोमा धन्यवाद ! खुसी छु, तपाईंहरुको संंयुक्त माया पाउन सफल भएकोमा ।” चलबलाई । दायाँपट्टिको ब्याग अलिकति सारी । बसाइको पोजिसन मिलाई । फेरि मोबाइल त्यसै गरी हातमा लिई र घ्याच्च पारी । स्क्रिन सारी, अनि फेरि बन्द गरी ।
कति स्वतन्त्र छ्यौ तिमी ? खुसी लाग्छ, तिम्रो स्वतन्त्रता देख्ता । तिम्रो खुलापनको प्रेमी हुँ म । यत्तिका अन्डरस्ट्यान्डिङ आपसमा ? ऊ अहिले मलाई साथ दिइरहेकी छ । यो यथार्थ जानकारी छ उसको लोग्नेलाई ? उसको स्वतन्त्रतादेखि भित्रभित्रै पिल्सिएँ म । धन्यवाद पनि टक्य्राएँ उसको लोग्नेप्रति ।
कुराकानी टुङ्गोमा पुग्न पाएन । अर्थात्, बिनामेसै सुरू भएको म उसै गरी अन्त्य भएँ । मन भने उकुसमुकुस भइरह्यो ।
अर्डरअनुसारको खाजा आयो— चिकेन मःम ।
कार्यालयबाहिरको पहिलो भेटमा हामीले स्प्रिङ रोल खाएका थियौं ।
बडो सतर्कतासाथ खाएकी थिई उसले, पूर्ण होसियारीमा । सतर्कता वा होसियारीको कारण थियो, सायद लिपस्टिक । खाइसकी । उसको लिपस्टिकले कत्ति पनि बाटो छाडेन । उसका ओठ अहिले पनि उस्तै थिए लालित्यमय ।
“तपाईंको लिपस्टिक लगाउने तरिका खुब मनपर्छ मलाई । साह्रै आकर्षक । जस्ताको तस्तै दिनभर । पक्कै पनि ब्रान्डेड हुनुपर्छ । कुन ब्रान्ड लगाउनुहुन्थ्यो कुन्नि ? मैले कस्तो ल्याएँ खै !”
म सामान किन्न जान्ने मान्छे होइन । तर किनकिन सपिङ सेन्टरकै सेल्स गर्ललाई सोधेर किनेको थिएँ, उसलाई गिफ्ट दिन । त्यसैबारे प्रतिक्रिया खोजें ।
“राम्रो ब्रान्ड रहेछ । म त्यति महँगो ब्रान्ड पनि लाउँदिनँ । सकेसम्म राम्रो त लाउने हो । तर ब्रान्डमा खासै सचेत छैन... ।”
उसले आफूले लाउने दुईतीन ओटा ब्रान्ड पनि भनेकी थिई । तर मैले मेसो पाइनँ ।
उफ् ! मेरो मनलाई नराम्रोसँग चिमोटेर गई ऊ फेरि । यसरी चिमोटेपछि “ऐया” सुन्नु पर्दैनथ्यो ? बेइमान !
मेरा पछाडि धेरै लाग्थे । एक कप कफीका लागि मरिहत्ते गर्थे । म बालै दिन्नथें । सँगै खाजा खाने, सँगै फिल्म हेर्न जाने अवसर पाउनुलाई भाग्यमानी ठान्थे केटीहरु । दर्जन । दर्जन त के, त्योभन्दा बढीको लस्कर । तर म भने एउटीका लागि ज्यानै फालिरहेछु । त्यो पनि ५० को दशकमा ।
यो कस्तो तार हो यादको । न कतै जोडिएको छ, न साँघुरो, न त लुरो । एकनास । सब कुरा बिर्साइदिने ।
निर्विकल्प ऊप्रतिको लगाव बढिरहेछ । आनन्द र आर्तनाद एकसाथ कसरी ? स्मृतिले आनन्द दिएको छ, क्षीण सम्भावनाले आर्तनाद ! यस्तो पनि कहीँ प्रेम हो ? हर्ष, उमङ्ग, उत्साह, ऊर्जा दिनुपर्ने होइन प्रेमले ? रात निकै छिप्पिइसक्यो तर निद्रा खै ?
बिस्तारै आई ऊ । कोमल पदचापसँगै छेउमा बसी । घाँसको मुठी पारेजसरी चरप्प अँगालो हाली । बिस्तारै टाउको ल्याएर छातीमा टाँसी । मैले सुमसुम्याएँ । उसको बढेको श्वासप्रश्वासले निस्पट्ट रातमा एकनासको सङ्गीत दिइरह्यो । धोको पुग्ने गरी चुम्बन गरें, केही बाँकी राखिनँ ।
धत् ! दुई परेली नजोडिईकनै मान्छेले सपना देख्छ यसरी ?
उफ्, कस्तो कल्पना ?
दाहिने फर्किएँ । श्रीमती मस्त निद्रामा थिई । स्मृति पनि किन यस्तो पीडादायी हँ ?
प्रेम विवाह गरेको पतिसँग पारपाचुके गर्न आएकी युवती रोएको सम्झिएँ । प्रेमको निसानी छोडेर बेपत्ता भएको कथित प्रेमी सम्झिएँ । दैनिक श्रीमान्को चड्कन सहेर बसेका कतिकति गृहिणी सम्झिएँ । सामाजिक सञ्जालमा प्रेमको बकसपत्र गरेका जोडीले आफ्नै अगाडि त्यो पत्र च्यातेको सम्झिएँ । अनेक घटना एकसाथ सलबलाइरहे निरन्तर ।
अनेक रङ्गतरङ्गको घेराबाट थकित मनले फेरि निश्चय ग¥यो— कस्तो सम्झौता प्रेमबिनाको ! भोलि नै तिमीले भेट्नुपर्छ मलाई । तिमीप्रतिको मेरो खास अजेन्डा ‘मेरो प्रेम’को सम्बोधन हुनुपर्छ तुरून्तै ।
तर अजेन्डाविहीन लाग्नेछ उसलाई मेरो प्रस्ताव— सर्वसाधारणका अजेन्डा, उद्योगीका अजेन्डा, व्यापारीका अजेन्डा, किसानका अजेन्डा, कलाकारका अजेन्डा, पत्रकारका अजेन्डा... ...। अनेकताभित्रै गुजुल्टिएर खुम्चिएको उसको राजनीतिक अजेन्डाभित्र खै मेरो प्रेमको अजेन्डा ?
तर प्रेम शाश्वत हो । यसबाट टाढिन सक्तिनौ तिमी । डेन्जर जोनबाट सुरक्षित क्षेत्रमा आउनैपर्छ तिमीले । राजनीति तिम्रो ठेक्का हो र ? कि पेवा ?
पत्रिका ल्याउनेले बेल बजायो । आँखा झिमिक्क नगरी कटेछ सिङ्गो रात ।
आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै पत्रिकाको हेडलाइनसँगै उसको मुटु काँप्यो । मनको तरेलीका लहर थाम्न सकेन सायद । अघि बढ्न नसकेर सँघारमै बस्यो थचक्क । तरङ्गका अनेक लहर ज्वारभाटामा परिणत भए, मन नलगाई पढ्यो— सम्भावित मन्त्रिमण्डलको सूचीमा झल्कियो— रातभरि मनमा अनेक तरङ्ग छचल्काउने चन्द्रिका शर्मा !